विमलेन्द्र निधिलाई गृहनगर जोगाउन मुस्किल, एमालेको कडा टक्कर – YesKathmandu.com
धनुषा । नेपाली काग्रेसका शिर्ष नेतृत्वहरु यती वेला चुनावी प्रचारका लागी मधेशमा छन । सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितको टोली मधेशमा चुनावी प्रचारको क्रममा संचारमाध्यमहरुसंग प्रस्तुत हुदा एमालेप्रति आक्रामक देखिन्छ । सभापति देउवाका विश्वास पात्र नेताको रुपमा देखिएका विमलेन्द्र निधिले टिकक वितरण देखि अन्य भुमिकामा हावी भए पछि अन्य पक्षका दुई नम्बरका नेता कार्यकर्ताले त्यसको खुलेरै विरोध गरेका थिए ।
तर निधिले पार्टीको दुई नम्बर भेलामा यस प्रदेशवाट काग्रेसले सय सिट जित्ने दावी गरेका थिए । चुनावी प्रचारका लागी धनुषामा रहदा दुई दिन अगाडी मात्र निधिले धनुषा सहित मधेशमा काग्रेसप्रति जनलहर चलेको दावी गरेका थिए । उनले मधेशवाट एमाले वढारिने दावी समेत गरे । तर नेता निधिको गृहनगर रहेको धनुषाको नगराईन नगरपालिकामा काग्रेस र एमाले विचमा मेयर पदका लागी कडा प्रतिस्पर्धा चलीरहेको छ ।
स्थानिय धेरै जानकारहरुले यसपाली उक्त नगरको मेयरमा काग्रेस भन्दा पनि वढी एमालेले हत्याउन सक्ने आकंलन गर्छन । नगराईन बजारका पुराना चिया पसलले सविर अन्सारी काग्रेसको कार्यकर्ता भएको अन्न्पुर्णलाई बताए । वुधवार विहान अन्न्पुर्णसंग भेटेका सबिर आफु काग्र्रसी भए पनि याहा अहिले सम्मको प्रतिस्पर्धामा एमाले अगाडी रहेका दावी गरे । धनुषा जिल्लाको दीक्षणी भेगमा रहेको यो नगरपालिका भारतीय नाका जटही संग जोडिएको छ । गएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा निधिलाई एमालेकी नेतृ जुली महासेठले कडा टक्कर दिएकी थिइन । १२ सय मतको अन्तरले मात्रै जितेका निधिले आफनो गृहनगरमा मेयर जिताउन सक्लान कि नसकिने हो भन्ने चर्चा नगराईन बजारको बहसको मुख्य मुद्धा अचेल बनेको छ ।
स्थानिय एउटा प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक महेन्द्र कापर भन्छन, यसपालीको स्थानिय तहको निर्वाचनमा निधि विरुद्धको मोर्चाबन्दी वलियो देखिएको छ । पार्टीहरु भित्र उम्मेदवार मनोयनमा देखिएको असन्तुष्टि संगै निधिले त्यस क्षेत्रमा काम गर्दा आफना मान्छेलाई मात्रै प्राथमिकतामा दिने गरेको गुनासा व्याप्त छन । त्यसको संगै निधिको शत्ति पार्टीमा वढे संगै उनले संस्थापन भनेर कोइराला समुहमा लागेका पुराना काग्रसीहरुलाई समेत उपेक्षा गरेका कारण अहिले निर्वाचनमा काग्रेस भन्दा एमाले हावी हुन पुगको स्थानियहरु तर्क गर्छन । निधि विरुद्धको त्याहा बनेको एमाले मोर्चाबन्दीमा दुर्गानन्द्य झालाई सहिद घोषणा पनि एमालेको सरकारले गरेको मुद्धा व्यापक चर्चाको रुपमा चलीरहेको छ ।
ऋघिल्लो सरकारमा उनी गृहमन्त्री हुदा उक्त नगरपालिकाका आफना १८ जना नजिकका मानिसहरुलाई राजनितीक पिडित भनेर १ लाखको दरले सहयोग गरेको मुद्धाले समेत उनकै पार्टी भित्र ठुलो मतभेद सिर्जना गरिदिएको देखिन्छ । हालको नगराईन नगरपालिका निधिका बुबा महेन्द्र नारायण निधि देखि सहिद दुर्गानन्द झा सम्मका कारण काग्रेसीहरुका लागी प्रभाव क्षेत्रमा गनिन्थयो ।
धनुषा जिल्लाको फुलगम्मा, लगमा नगराईन, गोरघास, गंगुली, अकौर सहितका दक्षिणी गाउहरु मिलेर नगरपालिका बनेको छ । निधि विरुद्ध गठवन्धन उक्त नगरपालिकामा अहिले बन्नुको अर्को प्रमुख कारण जटहीमा दुर्गानन्द झाको नाउमा अस्पताल नबन्नु पनि हो । पुर्ववर्ती सरकारमा काग्रेसका नेता गगन थापा स्वास्थय मन्त्री हुदा उनी आफै आएर उक्त नगरको जटहही पुगेर उक्त अस्पतालको घोषणा गरेको थियो ।
तर निधिकै अवरोधका कारण उक्त अस्पताल बन्न नसकेको चर्चा नगराईनको जटहीमा व्याप्त देखिन्छ । जुन सहिद झाको पैतिृक गाउ हो । त्याहावाट प्रतिनिधत्व गर्ने स्मृति नारायण चौधरी जस्ता काग्रेसका पुराना र प्रभावशाली नेताहरु समेत निधिको विरुद्धमा आन्तरिक रुपमा उभिएको दावी स्थानिय बजारहरुमा जताजतै सुन्नमा पाइन्छ ।
काग्रेसले उक्त नगरमा परमेश्वर यादवलाई मेयरको लागी उम्मेदवार बनाएका छन भने एमाललेले रामबाबु पजियारलाई मेयरको उम्मेदवार बनाएको छ । माओवादी केन्द्र, राजपा, फोरम सहित स्वतन्त्र गरि त्याहा १७ जना मेयरका लागी उम्मेदवार रहेको स्थानिय निर्वाचन अधिकृतको कार्यलयले जनाएको छ । यहा १८ हजार ७ सय ६६ मतदाता छन । अन्नपूर्णपोष्टबाट
निर्वाचन आयोगमा ३५० उजुरी ! देउवा, नेपाल र प्रचण्डलाई होला एक लाख जरिवाना ?
चुनावकै मुखमा चार डीआइजी एआइजीमा बढुवा
संविधान बनाउन दलहरुबीच १६ बुदे सहमति (यस्तो छ सहमतिको पूर्णपाठ)
दिल्ली भर्सनको असफलता पछाडि ‘अंग्रेजी भर्सनमा’ मधेशीको आन्दोलन ?
बाम तालमेलले गोरखालाई छोएन, पार्टीपिच्छे छुट्टाछुट्टै उम्मेदवार
मङ्सिरको चुनावपछि तीनओटै पार्टी एकता गर्ने , के-के छन् सहमतिपत्रमा ?
किरा परेको बिस्कुट बेच्दै गौरीशंकर फुड्स
खाडी जाने पुरुषको संख्या घट्यो, महिलाको संख्या ९ प्रतिशतले बढ्यो
पर्यटन बोर्डको घोटाला काण्डमा निरौला भ्रष्टाचारी ठहर, ७ बर्ष कैद सजाय
राजपा नेताको नजरमा कसरी बने उपेन्द्र यादव बाहुवलीका ‘कटप्पा’ ?